Elihambayo Belt Jointing Machine, elihambayo Belt usike Machine - Antai
Kungumshini omusha wokuhlanganisa (ukulungisa) omusha omuhle futhi osetshenziswe kabanzi ekusetshenzisweni kwensimbi, izimayini, usimende, izikhungo zokuphehla ugesi, amachweba, izinto zokwakha, amakhemikhali neminye imikhakha.
IZINDLELA ANTOI TOOLS ANGAZIMISANA NAYO
Sectional Belt Vulcanizing Cindezela ZLJ Series Hea ...
Ukusetshenziswa Indwangu ibhande 100 p ....
Ukulungiswa Kwe-Edge Vulcanizing Press yeRubber Convey ...
Imodi Yencazelo Yezinto ...
Izici: Amandla aphezulu al ...
Umshini wokucindezela amanzi opholile umshini we-vulcanization
Model Belt ububanzi (mm) ...
Elihambayo ibhande vulcanizing ngoba splicing ezishisayo
DB-G uhlobo Steel Cord elihambayo Belt uyaxebuka Mach ...
Izici 1. Umkhonto wokuxebuka ...
Cold Bond Usimende Rubber elihambayo Belt Splic ...
Izici Okungacimi umlilo ...
C-ngocingo yokulungisa Vulcanizing Cindezela Rubber Bel ...
I-Model Temperatur ...
Cindezela Vulcanizing Cindezela for Light Rubber ...
I-Qingdao Antai Mining Machinery Co, Ltd. ter ngemuva kwalokhu ebizwa nge-Antai Company） isendaweni enhle yeQingdao West Coast Economic Zone, i-Antai manje isiyibhizinisi lesimanje lokukhiqiza imishini nemishini enenethiwekhi yonke yomklamo wocwaningo, owenziwa kanye ukufakwa, ukugcinwa ngemuva kokuthengiswa, ukugcinwa kwemishini kanye nezinsizakalo zokubonisana.
Januwari / 22/2021
Njengethuluzi elihlangene lebhande lokuhambisa, i-vulcanizer kufanele igcinwe ngendlela efanayo namanye amathuluzi ngesikhathi nangemva kokusetshenziswa ukunweba impilo yenkonzo yayo. Njengamanje, umshini wokuqhafaza okhiqizwe inkampani yethu unempilo yokusebenza iminyaka engaphezu kwengu-10 inqobo nje uma usetshenziswa kahle futhi ugcinwa kahle. I ...
Ukusetshenziswa Nokuthuthukiswa Kwebhande Lokuhambisa
Ibhande elihambayo liyingxenye eyinhloko yokuhambisa ibhande. Isetshenziselwa ikakhulukazi ukuthuthwa okukhulu okuqhubekayo emikhakheni yamalahle, yezimayini, yokusansimbi, yamakhemikhali, yezokwakha neyezokuthutha. Izinto ezizothuthwa zihlukaniswe ngamabhuloki, izimpushana, amapasta nezicucu. Izinto njll Ukuhambisa ...
Indlela ehlanganyelwe yebhande elihambayo lenjoloba
Lapha i-THEMAX izokwethulela izindlela eziningana ezihlanganisiwe zamabhande wokuhambisa injoloba. Ibhande elihambayo kufanele lixhunywe ku-loop ngaphambi kokuthi lisetshenziswe. Ngakho-ke, ikhwalithi yokuhlanganiswa kwebhande elihambayo ithinta ngqo impilo yesevisi yebhande elihambayo nokusebenza okushelelayo kwe-conveyor lin ...